Semalt: I-WordPress Plugin Tips
Kwezinye iimeko, umqalekisi we-WordPress angadinga ukongeza umsebenzi obongezelelweyo kwiwebhusayithi yabo. Iiplagizi ziza neefayile zeFP ezifaka iimpawu kwiSihloko sakho se-WordPress ngaphandle kokuguqula ikhowudi yewebhu jikelele. Ngokungafani neefowuni eziqhelekileyo, iplagin ye-Site-Specific ye-WordPress izakugcina ii-shortcodes zakho nangona utshintshe umxholo wakho. Kule meko, ungadinga ukudala iplagi yangokwezifiso ukusebenzisa kwiwebhusayithi yakho ye-website ye-press. Iikhokelo ezininzi ze-intanethi azichazi indlela yokudala iplagi ye-WordPress ye-site.
Kule nqaku, unikezwe ngu-Andrew Dyhan, oyingcali ekhokelayo Semalt, uya kufunda indlela yokwenza iPPP yakho iplagi. Uyakukwazi kwakhona ukudala i-snippet engabongeza ukwenziwa komntu okanye ezimbini kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress.
Yiyiphi iplagi ye-WordPress ye-site ethile
I-plugin ye-Word-Specific ye-WordPress yakha iplatifti oyifaka ngayo imiyalezo engabikhoyo. Kwamanye amaxesha, unokukhubeka kwiindlela ezininzi zokuthi 'njani' iinkqubo zewebhusayithi yakho yeWindowsPress. Uninzi lwezi ndlela zibandakanya izitayela zenkcubeko ezinokuthi okanye kungenjalo iifowuni. Ngale lwazi, unako ukongeza le miboniso kwifayile yakho yemisebenzi.php ukufumana le miphumo. Ezi ntshukumo zixhomekeke kwimixholo yakho yangoku. Ume ukulahlekelwa zonke iinguqulelo xa uguqula umxholo, utshintshe umxholo wakho okanye utshintshe ezinye zeemisebenzi. Nangona kunjalo, iplagijethi ethile yendawo igcina zonke iinguquko xa wenza utshintsho.
Iiplagizi ze-WordPress zeSayithi zigcina inguqu enkulu xa uguqula iindawo ezininzi zewebhusayithi yakho. Ngaphezu koko, unokuquka iinkalo ezingathembeki kumxholo wakho ezifana nokusebenzisa iiNdawo zoThutho zeNdwendwe, Ukongeza i-WordPress I-Support Support, ukufaka ii-Shortcodes, okanye ukubuyisela kwakhona iindwendwe kwi Post Post Random.
Ezi zinto zikhankanywe ngasentla, ufuna i-plugin okanye iikhowudi ezigcina izicwangciso nangona utshintshe umxholo wakho. ukugcina zonke iikhowudi zakho kwiziko lakho, ukuzisa ukusetyenziswa kwe-plugin ye-Site-Specific WordPress.
Kwezinye iimeko, ii-snippets zingabangela ukungaphumeleli kwiwebhusayithi ye-WordPress. Ngokomzekelo, i-newbies inokubambelela kwi-WordPress ngokusebenzisa ifomathi engalunganga. Le mpazamo ingakhokelela kwisikrini esimhlophe sokufa, imeko engakhokelela ekulahlekelweni kwendawo epheleleyo okanye utshintsho olungalondoloziwe. Kwamanye amaxesha, abasebenzisi bahlela ii-snippets zabo ngokusebenzisa i-backpress WordPress. I-plugin ye-WordPress yeSayithi yindlela ekhuselekileyo yokuzama amaqhinga amatsha.
Ukudala iplagi ye-WordPress ye-Site-specific
Le yinkqubo ecacileyo. Kufuneka udale ifolda entsha kwi-WP yakho yeefowuni zeefayili. Umzekelo: / wp-umxholo / iiplagi / igama lakho lomsebenzisi-plugin /
Kulo ndawo, yakha ifolda uze ungeze ifayile ye-PHP kuyo. Qinisekisa ukuba usebenzisa igama elifanayo lefayile kwifayile yefolda. Ngokomzekelo, kwi-plugin elula, ungasebenzisa ikhowudi:
Igama lomqulu: I-Plugin yeSayithi ye-thisexample.com
Inkcazo: Utshintsho oluthile lwekhowudi kwi-thisexample.com
/ * Qala Ukongeza imisebenzi ephantsi kwelo Mgca * /
/ * Yeka Ukongeza imisebenzi ephantsi kwelo Mgca * /
Unokuyilayisha kwaye ulondoloze le iplagin kwi-directory yakho kwiDashboard yeDashboard. Khumbula ukuvula i-plugin Source .